Zlatan Ibra “Messi waa nuuc gooni ah, umana malaynayo in aan arki doono laacib sidiisa oo kale ah” – Gool FM
Zlatan Ibra “Messi waa nuuc gooni ah, umana malaynayo in aan arki doono laacib sidiisa oo kale ah”
Haaruun December 30, 2016
(Manchester), 30 Dis 2016 –Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Ingiriiska Zlatan Ibrahimovic ayaa ammaanay dhaliyaha kooxda Barcelona ee Spain Lionel Messi kaas oo 5 jeer ku guuleystay Kubadda Dahabka ah.
Wareysi gaar ah oo dhinacyo badan ka hadlaya oo uu Ibra siiyay Shabakadda ESPN ayuu kaga warramay laacibkii hore ee ay ka wada tirsanaayeen Barcelona xilligii 2009-10 waqtigaas oo uu Zlatan u soo saftay naadigaasi.
“Waxaan u malaynayaa in Messi uu yahay nuuc gaar ah, mana garanayo inaan arki doono laacib sidiisa oo kale samayn kara wixii uu sameeyay, maxaa yeelay wuxuu leeyahay qaabkiisa u gaarka ah ee ka dhigay laacibkaas uu haatan yahay, uma malaynayo inay suurtogal tahay” ayuu yiri Ibrahimovic.
“Waxaan lahaa nasiibka aan maalin walba ku arkayay Messi, sida aan horey u sheegayna waa sida Ciyaar gacmeedka ‘PlayStation” ayuu sii raaciyay.
Messi ayaa sanadkan 2016 dhaliyay 51 gool, halka Weeraryahanka Swedish-ka uu dhaliyay 33 gool xilligii uu joogay Paris Saint-Germain, isagoo haatanna 17 gool u dhaliyay kooxda Manchester United oo uu ku soo biiray xilli ciyaareedkan.
Ibrahimovic ayaa mar la weydiiyay in Messi uu la qabsan karo haddii uu ka tago Barcelona oo uu Horyaal kale aado ayaa waxa uu ku jawaabay “Waxa uu Barcelona joogay sanado badan taasina waa arrin loo riyaaqo, haddii halkaasi uu ku guuleystayna dabcan wuu ku najixi karaa haddii horyaal kale u aado, maxaa yeelay waa nuuca jecel kubadda cagta”.
Real Madrid oo dhaawacyo hor leh wajaheysa
RASMI: Jose Mourinho oo xaqiijiyey in kaliya hal ciyaaryahan oo ka tirsan Man United uu amaah ku baxayo bisha Janaayo